Sales Supervisor | Beauty Diary ﻿
18.12.2018, Full time , Beauty / Cosmetics
Company: Beauty Diary
PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.Beauty Diary ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးဦးဖြားဖြား ထူးထူးခြားခြား၊ ပထမဦးဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံး Beauty & Health Care Speciality Chain Store ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ 100% Authentic Cosmetics & Skin Care Brand များစွာ၊ Health & Personal Care ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို Beauty Diary တစ်နေရာတည်းမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။We, Beauty Diary, is the best store for your beauty needs. PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.သင့်ရဲ့အလှပဆုံးမှတ်တမ်းကို ရေးထိုးနိုင်ဖို့ Beauty Diary ကိုကြွလှမ်းခဲ့ပါ။
•	ဆိုင်ခွဲ၏Sales Target နှင့် Sales Promoter/ Sr. BA များ၏ Sales Target များပြည့်မှီအောင်စီမံခန့်ခွဲ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်
•	Sales Promoter/ Sr. BA များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်
•	အရေးကြီးသော Customer complaint များအား တာဝန်ယူဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်
•	Sales Supervisor သည်ှSr. BA နှင့် Sales Promoter တို့ကို ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲရန်
•	Sales Target ပြည့်မှီအောင် ဆောင်ရွက်ရန်
•	Counter များ၏ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုအား စစ်ဆေးရန်
•	Sr. BA နှင့် Sales Promoter တို့၏ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုနှင့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုအား စစ်ဆေးရန်
•	ကုန်ပစ္စည်း အမှာစာများအား သေချာစိစစ်ပြီး တင်ပြရန်
•	Daily Sales, Weekly Sales, Monthly Sales များအား သေချာစွာစီစစ်ပြီး တင်ပြရန်
•	Customer complaint များအား အကောင်းမွန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်
•	အရောင်းအခြေအနေအား အမြဲတမ်းဆန်းစစ်ရန်
•	Sr. BA နှင့် Sales Promoter တို့၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အားအကဲဖြတ်ရန်
•	သင်တန်းပေးပို့လိုအပ်သူများကို သင်တန်းပေးနိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းသားစာရင်း ပြုစုရန်
•	နေ့စဉ်လုပ်ငန်ဆောင်တာများအား အကောင်းမွန်ဆုံးဖြင့် ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရန်
•	Showroom တွင် ပြုလုပ်သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပွဲများ၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရတာဝန်ချထားပေးမှုအား သေချာစွာလိုက်နာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်
•	For The Body Shop
•	အလှကုန်လုပ်ငန်းတွင် အနည်းဆုံး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်အထက်ရှိသူ
•	စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်အားသင်တန်းအောင်လက်မှတ်
Work location Sayar San Road, Bahan Tsp, Yangon
Company Industry: Sales Supervisor
Job posted: 18/12/2018
307 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
•	Must be able to do hardware and networking installation, trouble and maintenance •	Go and check around all Beauty Diary shop and maintenance for all networking and system problem •	At least2or3years experience in IT professional field •	Good communication skill •	for Beauty Diary
PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.
Beauty Diary ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးဦးဖြားဖြား ထူးထူးခြားခြား၊ ပထမဦးဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံး Beauty & Health Care Speciality Chain Store ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ 100% Authentic Cosmetics & Skin Care Brand များစွာ၊ Health & Personal Care ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို Beauty Diary တစ်နေရာတည်းမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
We, Beauty Diary, is the best store for your beauty needs. PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.
သင့်ရဲ့အလှပဆုံးမှတ်တမ်းကို ရေးထိုးနိုင်ဖို့ Beauty Diary ကိုကြွလှမ်းခဲ့ပါ။
•	ဆိုင်ခွဲတခုလုံး၏စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စအ၀၀ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်။ •	ဆိုင်ခွဲဝန်ထမ်းများ၏၀န်ထမ်းရေးရာကိစ္စအ၀၀ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်။ •	အရောင်းဆိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုအားအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်စီမ ...
•	ဆိုင်ခွဲတစ်ခုလုံး၏ ရောင်းအား အတက်/ အကျ ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် •	ဆိုင်ခွဲတစ်ခုလုံး၏ စီမံခန့်ခွဲရေး ကိစ္စအ၀၀ ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် (မီး၊ ရေ၊ အဆာက်အဦး) •	အရောင်းဆိုင် စီမံခန့်ခွဲမှုအား အကောင်းမွန်� ...
Brand Team Leader
•	မိမိတာဝန်ယူထားသော Brand အကြောင်းကို သေချာစွာ လေ့လာသိရှိပြီး Online & Offline Marketing Activities များလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	Marketing Strategy များကိုသေချာစွာ သိရှိပြီး Upper Management ၏ စီစဉ်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	Under Pressure ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ...
•	ဆိုင်ခွဲ၏Sales Target နှင့် Sales Promoter/ Sr. BA များ၏ Sales Target များပြည့်မှီအောင်စီမံခန့်ခွဲ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် •	Sales Promoter/ Sr. BA များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် •	အရေးကြီးသော Customer complaint များအား တာဝ� ...
•	Good communication and negotiation skill with supplier •	Able to work under pressure •	for Beauty Diary
•	Using social media marketing techniques to increase visibility,membership,loyalty and traffic of TBS Myanmar Facebook Page and Instagram Page •	Develop online campaigns to drive awareness to increase relevancy,acquisition and reach(based on agreed KPIs) •	Manage social media platforms by creating regular posts,answering comments and private messages inatimely and professional manner •	Plan and develop weekly and monthly social media content for Facebook and Instagram from adaptation of BSI assets with General Manager.
•	Conduct market research to determine market requirements for existing and future products •	Manage and coordinate all marketing, advertising and promotional staff and activities •	Analysis of customer research, current market conditions and competitor information •	Develop and implement marketing plans and projects for new and existing products Expand and develop marketing platforms •	Manage the productivity of the marketing plans and projects •	Monitor, review and report on all marketing activity and results •	Develop pr ...
Businiess Development Leader
•	Welling Communicate with oversea own brand office using with email, line, etc.. •	Dealing and planning of business unit of oversea own brand office •	Record import data from foreign countries •	Must have business knowledge and research detail market of own brand •	Overview the marketing department
Essence Sale Leader
•	ဆိုင်ပတ်ပြီး ကောင်တာများကို Check လုပ်ရမည်။ •	ကောင်တာ သန့်ရှင်းရေး၊ Tester သန့်ရှင်းရေး၊ ဆိုင်မှ Sale Promoter ၏ အခြေအနေစသည်တို့ကိုစစ်ဆေးပြီး report တင်ရမည်။ •	Brand Promotion ရှိလျှင် ဆိုင်တွင် လိုအပ်လျှင် ဆင်းပေးရမည်။ •	Sale Promo ...
•	Management to recruitment process , (online job portal, journal, agencies, website) •	Record to update staff data base •	Making to employee attendance, Leave record, salary calculation ,SSB, Income Tax and labor law (excel specialized) •	Report to HR Manager - Good communication skills & Personality •	Able to work under pressure Holidays - Sunday & Gazette
•	Conduct market research to determine market requirements for existing and future products •	Assist for Marketing Assistant Manager •	Analysis of customer research, current market conditions and competitor information •	Planning for marketing's activities and productions for new & existing products •	Prepare and collect data for marketing team •	Monitor, review and report on all marketing activity and results •	Create marketing presentations •	Collaborate with the sales function
The Body Shop - Sales Supervisor
318 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
Sale Supervisor for Beauty Diary
319 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
•	ဆိုင်ပတ်ပြီး ကောင်တာများကို Check လုပ်ရမည်။ •	ကာင်တာ သန့်ရှင်းရေး၊ Tester သန့်ရှင်းရေး၊ ဆိုင်မှ Sale Promoter ၏ အခြေအနေစသည်တို့ကို စစ်ဆေးပြီး report တင်ရမည်။ •	Brand Promotion ရှိလျှင် ဆိုင်တွင် လိုအပ်လျှင် ဆင်းပေးရမည်။ •	Sale Promot ...
The Body Shop-Sale Promoter
•	အသက် (18) နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။ •	Cosmetic နှင့်ပတ်သက် သော knowledge ရှိရမည်။ •	English language အသင့်အတင့် ရှိရမည်။ •	စကားပြောဆိုမှု ယဉ်ကျေးရမည်။ •	အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
Sales Leader & Supervisor
•	မော်လမြိုင် မြို့တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Age(25-35), Any Graduate, Computer Basic/Excel တက်ကျွမ်းရမည်။
•	Nature Republic (Showroom) များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ •	အသက် (၂၅-၃၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ •	Any Graduate, Computer Basic Skill ရှိရမည်။
Sale Promoter for Beauty Diary Yangon
•	အသက် (18) နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။ •	Cosmetic နှင့်ပတ်သက် သော knowledge ရှိရမည်။ •	English language အသင့်အတင့် ရှိရမည်။ •	စကားပြောဆိုမှု ယဉ်ကျေးရမည်။
Digital Marketing-Essence Brand
•	Any Graduate •	Good communication and relationship with customer •	Must have Cosmetic and Skin care knowledge
343 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
•	Nature Republic (Showroom) များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ •	Cosmetics, Skin Care Counter အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	Sales Promoter များအား Product knowledge ပေးနိုင်ပြီး လိုအပ်သောစည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာများအား Management လုပ်နိုင်ရမည်။ • စနေ၊တနင်္ဂ� ...
•	Creative and sense of good idea •	Ensure standardized display and cosmetic item for all shop •	Follow to business Partnership Company •	Approve to packing sample and item price •	Management to Merchandising teams •	Good communication skill •	Able to work under pressure •	for Beauty Diary
•	တိကျစွာသေချာစွာလုပ်ကိုင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ •	Comestic ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	for Beauty Diary
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ •	တိကျသေချာစွာ လုပ်ကိုင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
•	မော်လမြိုင် မြို့တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Cosmetics /Skin Care အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
344 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိရမည်။ •	Manage social media platforms by creating regular posts, answering comments and private messages inatimely and professional manner •	Plan and develop weekly and monthly social media content for Facebook and Instagram •	For Essence Brand
Sales Supervisor Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Beauty Diary Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Search best job in Oktwin at www.jobless.com.mm. Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Work in Yangon (Rangoon)(7164)
Work in Yangon Region(1593)
Frenzo Myanmar Co.,Ltd
Doh Tar Won Co.,Ltd
Yangon (Rangoon) 111 Days
Yangon (Rangoon) 152 Days
Yangon (Rangoon) 161 Days
Yangon (Rangoon) 200 Days
Yangon (Rangoon) 222 Days
Yangon (Rangoon) 270 Days
Yangon (Rangoon) 343 Days
Yangon (Rangoon) 392 Days
Yangon (Rangoon) 483 Days
After Sales Service Assistant